A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Fedora 32, mara akụkọ ya | Site na Linux
E kwupụtara ọkwa ọhụrụ nke Fedora 32 nke na-ekwe nkwa ịbụ nsụgharị nke na-eme ka njikwa ncheta, usoro na karịsịa arụmọrụ usoro. Versiondị ọhụrụ a nke Fedora 32 bịarutere otu izu na-abịa n'azụ, mana na-agbaso ụbọchị ndị mmepe ahụ guzobere mgbe ekwuputara oge igbu oge n'ihi nsogbu kpatara njehie.
Fedora 32 Ọ dị ugbu a ibudata na ụdị nke Desktọpụ ya, Server, CoreOS, yana "ntụgharị" a ma ama na KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE na LXQt. A na-enyekwa ụlọ maka x86_64, Power64, ARM64 (AArch64), yana ngwaọrụ dị iche iche nwere nhazi ARM 32-bit.
Na-enweghị oge ọzọ, nke a bụ ihe Fedora 32 nke ọhụụ a na-ewetara anyị
1 Main ọhụrụ atụmatụ nke Fedora 32
Main ọhụrụ atụmatụ nke Fedora 32
Uno nke isi mgbanwe nke ohuru ohuru a bu iwebata usoro usoro 'Earlyoom' (nke anyị kwurula na ihe karịrị otu oge ebe a na blọọgụ) na na-enye gị ohere ịzaghachi ọsọsọ na enweghị ncheta na-enweghị iru oku na onye nlekọta OOM na kernel, nke na-ere ọkụ mgbe ọnọdụ ahụ siri ike.
Ọzọkwa iwebata "fstrim.timer" pụtara ìhè (usoro ihe eji arụ ọrụ) nke na-amalite ọrụ fstrim.service otu ugboro n'izu iji zipu ozi gbasara akwara ejibeghi sistemụ ndokwasa Ihe nchekwa LVM na ebe nchekwa ike ịgbasa. Usoro a na - eme ka SSD na NVMe draịva na - akwa ma na - abawanye arụmọrụ nke nhicha ngọngọ, na kwa na LVM ọ na-eme ka ojiji nke ezi uche dị na ya ghara ịmalite site n'ịkepụta ohere nchekwa.
N'ebe a na-ahụ anya, anyị nwere ike ịchọta nke ahụ emeputara ohuru nke GNOME 3.36, nke ngwa dị iche maka ijikwa plugins maka GNOME Shell apụtawo, se mere ka atụmatụ nke nbanye na ihuenyo mechie nke ọma, E megharịrị ọtụtụ n'ime mkparịta ụka sistemụ ahụ, ọrụ nke ịmalite ngwa site na iji GPU pụrụ iche na sistemụ nwere ngwakọ ngwakọ.
Na nyocha mode, ike itinye aha akwụkwọ ndekọ aha na ngwa ngwa, agbakwunyere bọtịnụ "echegbula" na usoro ngosi, a ga-agbakwunye nhọrọ iji mee ka ọ bụrụ ọkachamara ntọala mbụ Njikwa Nne na Nna, wdg.
Site na ndabara, ngwugwu a na-eji iptables-nft mee ihe kama iptables-kpụrụ dị ka ọ na-enye usoro ọrụ iji hụ na ndakọrịta na iptables nwere otu usoro ntinye iwu mana sụgharịa iwu ndị na-apụta na nf_tables bytecode.
Na mmekọrita Fedora Python 2 Ọgwụgwụ nke Ndụ Ihe ngwugwu Python2 na ngwugwu niile choro ka Python 2 rụọ ọrụ ma ọ bụ gbagoo ga-ewepụ. Maka ndị mmepe na ndị ọrụ chọrọ Python 2, a ga-enye ngwugwu python27 dị iche iche nke a ga-ahazi n'ụdị ụdị niile (enweghị obere ngwugwu) ma ọ bụghị ka ejiri ya dabere na ya.
Ejikọtara onye ntụgharị okwu Python na ọkọlọtọ "-fno-semantic-interposition", iji ya mee ihe na nyocha gosipụtara mmụba arụmọrụ nke 5 ka 27%.
Na nchịkọta ndị na-akọwapụta ndị ọrụ na otu ha, gbanwere na nkọwa onye ọrụ na usoro yiri ya na sysusers.d. E tinyela koodu na njikwa ngwugwu DNF iji zipu ozi dị mkpa maka nyocha ka zuo oke nke onye ọrụ nkesa.
Kama ibugharị ebugharị nke UUID, atụmatụ dị mfe dabere na oge ntinye oge na agbanwe agbanwe yana data gbasara ụlọ na ụdị sistemụ arụmọrụ na-etinye n'ọrụ.
Ọzọkwa E wepụtara ego "free" na "non-free" site na ọrụ RPM Fusion maka Fedora 32, na nke ngwugwu na ntinye ngwa oru ndi ozo (MPlayer, VLC, Xine), ihe nlere vidiyo / olu, nkwado DVD na ihe AMD na ndi NVIDIA ndi na-egwu egwu, mmemme, emulators di.
Maka ndị nwere mmasị ịnwe ike inweta onyonyo nke sistemu ọhụrụ nke sistemu a, ha nwere ike nweta ya njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Fedora 32, mara akụkọ ya
Iji nweta nkwalite Fedora 31 na Fedora 32
sudo dnf nwelite -mmegharịrị
sudo dnf wụnye dnf-plugin-system-upgrade
sudo dnf sistemụ kwalite ihe –megharịrị –releasever = 32
MS PowerToys: Mepee Isi Ikike maka Windows 10 Ndị Ọrụ